Frantsa Mitohy hatramin` ny 11 mey 2020 ny fihibohana
Nanao fanambarana ny Filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron omaly manoloana ny ady amin` ny COVID-19.
Nanapa-kevitra ny governemanta frantsay fa hitarina hatramin` ny 11 mey indray ny fihibohana. Tokony handeha tsikelikely izany fialana amin’ny fihibohana izany, hoy izy. Aorian` io daty voatondro io dia ho miandalana ny fisokafan'ireo sekoly, kolejy ary lisea. Ho amin` ny fampianarana ambony kosa dia amin` ny 20 septambra 2020 ny fidirana. Araka ny toromariky ny Filoha Macron dia tsy mbola misokatra ireo trano fisakafoanana sy ireo fanaovana hetsika famoriam-bahoaka. Tena fahavalo goavana ny famoriana olona sy ny fivezivezena, hoy izy. Tokony hahena sy tazonina ho kely hatrany ny fihetsehan’ny olona izay tena mitarika ny fihetsehan’ny otrikaretina. Marihana fa i Frantsa no firenena nanana vahoaka hendry indrindra tamin` ny fihibohana an-trano nandritra izay iray volana izay
. Marigny A.